Qaaxo oo Qubxi iyo Cantarabaqash Internetka ku Qufay, Qorayna Qoraal Isburinaya – Rasaasa News
Jun 23, 2010 buufis, Dr. Dolal, Jwxo, Jwxo-shiil, kooxda, Qaaxo, radiyo xoriyo, sheekh ibrahinonlf, UWSLF
Duq bastiis kiciwaayey baanay oo afka taagay oo Buufis siyaasadeed galay maanta, bisayl wuu ka fogyoo bilaash weeye warkiisu. Qaaxo waan baranoo qubxi buu daldalaa, siyaasadiis qudhun weeye oo qawlaysataan u naqaan shacabkiibaa ka qashaafay oo quruxloow Sheekh Ibraahin iyo Macaanow Saalax mideeye Makarfoonkay u hayaan.
Kooxa Jwxo-shiil, oo masayr noocii ugu dambeeyey uu koruceliseeyey oo ideecadaha isu daba maraya iyaga oo dacwo ah.
Anigaa ONLF ah, Salaaxudin sokeeye ma ah, ONLF waa laga saaray, lacaguu cunay, waxaan aad ugu qoslay kolkaan maqlay erayadaas oo ka soo yeedhay Mr Qaaxo oo kolkii uu dilay Dr. Dolal damcay in uu bililiqaysto darajada Dr, loose diiday.
Waxaa la yidhaahdaa “Ummuli wax ka ilowsho dhan” anigu waxaan odhan lahaa “doqonto abaal ma leh waxna ka ilowsho dhaw”. Qaaxo Abaal la,aantiisa waxaa weeyey ninkii Saaxiibkiisii sababy in isaga oo Jarmal ku dabran geeyo Australia xabad ku abaal mariyey Dr. Dolal. Salaaxudiinka uu saaka caayayo sowkii ma ah isaga oo Jarmalka sideed caruura kula nool warqada cuntada dukaamada lagaga qaatana ku nool, uu mudane Saalaxudin mushaarkiisa qayb u gooyey ma ah.
Qaaxo Abaal daranaa oo ilowsho dhawaa. Wuxuu yidhi Saalxudiin Jabhada waa laga saaray munaafaqnimadiisa socon wayday ee Jwxo burburisay ayey ahayd midii uu Jwxo-shiil u sheegay in uu la coloobo Mudane Salax iyo Dr. Dolal.
Hantida uu dadka beenta uga sheegay ee uu yidhi lacag buu Jwxo ka cunay miyeyna ahayn tii sanadkii 2005 ay isaga iyo Jwxo-shiil ku laa luusheen saraakiisha Itobiya si ay ugu soo dhameeyaan nabad ma ah. Xiligaas oo uu Saalax waydiiyey meesha ay ku bixiyeen lacagtaas “nin kaa hadal badan hooyaday wasay buu kaa siiyaa” sidaas ayey taageerayaashooda u sheegeen.
Ideecadii Jwxo, ayuu Saalax dhacay, aan isweydiine Ideecadu maxay ahayd? Radiyo Xoriyo waxaa kireeyey oo ku soo saaray magaca Aabihiis Professor Cabdiraxman Xaaji Macow, mudane Salaxudin wuxuuna heshii la galay Dutchwella oo furtay short wave-ka Radiyo Xoriyo magacana Dr. Dolal ayaa siiyey.
Kolka ay sidaas tahay Qaaxo, yaa warkiisa qoraya.
Ina-dhuubo, waxaa uu isna si insaaraxo wareer ah ideecadaha uga sheegay erayadaas kuwo la mid ah. Aan isweydiine Ina-dhuubo, muxuu ahaa kolkii uu Saalax ka waday dalka Jarmalka hawlaha ururka ONLF. Ina-dhuubo ku dheeraan maayo waxaa uu ahaa nin la shaqeeya Meles Sinawi oo uu maanta ka masayr sanayahay in Salaxudin oo ONLF hogaaminaya uu la heshiiyo.
Ind-dhuubo arimihiisa kale oo dhan taaban maayo, waxaanan u daynayaa dadweynaha isaga iyo wiil yar oo uu waa dhaw xidhiidh la mid ah ka raga iyo haweenka uu ku dhaxmaray Qaahira.
Salaxudin, waxay dadweynaha Somalida Ogadeeniya iyo Somaliduba u taqaan in uu yahay gudoomiyaha ururka Jwxo, ka dib kolkii Jwxo-shiil, xilka laga xayuubiyey ama uu ka dhacayba xiligii loo idmaday xiligaas oo ahayd 2007.
Heshiis kasta oo uu saxiixo Gudoomiyaha Jabhada wadaniga Xoraynta Ogadeeniya Eng. Salaxudin Cabdiraxmaan Xaaji Macow.